टोकियो टावरमा चढेर आँखाले भ्याएजति सवै दृष्यहरुमा आँखा र मनलाई मनोराजन दिएर मानावुसान सँगै म के तल उत्रिएको थिएँ मेरै अगाडि बडेमाको लेण्डक्रुजर गाडी आएर रोकियो । लेण्डक्रुजर गाडी त मैले प्रसस्त देखेको थिएँ तर यसअधि देखिएका लेण्डक्रुजर गाडी भन्दा मैले देखिरहेको गाडीको वनोट र प्रकृतिमा केही भिन्न थियो । स्वभाविक लेण्डक्रुजर गाडी भन्दा आकार र आयतनमा केही ठूलो गाडीबाट मैले हेर्दाहेर्दै एउटा अचम्मको ज्यान भएको बाँदरलाई उसका मलिकले वडो इज्जत पूर्वक गाडीको पछाडि पट्टिको ऊ वसिरहेको सुविधा सम्पन्न सिटबाट निकाल्यो । म भने अचम्म र उदेक मानेर वाँदरलाई हेर्न थालेँ । त्यति मोटो वाँदरलाई मैले यस अधि कहिलै देखेको थिइन । सुनेको थिएँ जनकपुरको रामजानकी मन्दिरको आसपासमा एउटा अजंङ्गको वाँदर छ जस्लाई स्थानीय भाषामा बौवा हनुमान भन्दछन् र सामान्य अरु वाँदर भन्दा उसको वजन निकै वढी छ । भक्तहरुले खुसी भएर उसलाई हनुमानकै सगोत्री सँग दाँजेका हुँदाहुन् । हेर्न मन हुँदाहुँदै जनकपुरको बौवा हनुमान विते पछि मलाई धेरै पछि सम्म थक्थक् लागेको थियो आफ्नै देशमा भएको त्यति ठूलो बाँदरलाई भेट्न नपाएकोमा । मेरो मनमा त्यो बाँदरलाई देख्ने वित्तिकै एक्कासी बौवा हनुमानको याद आयो । स्वदेशमा देख्न नपाएको बौवा हनुमानको भाई यति लामो समुन्द्र काटेर कसरी जापान सम्म आई पुग्यो मलाई अचम्म लाग्यो । किनभने मेरो अगाडि मैले कल्पना गरेकै बौवा हनुमान प्रत्यक्ष खडा थियो । जस्लाई म अति सुविधा सम्पन्न टोकियो सहरमा भेटिरहेको थिएँ । तर उ मेरो देशमा स्वर्गे भइसकेको बौवा हनुमान जस्तो कुनै मन्दिरमा थिएन । उ त करोडौ रुपैयाँ पर्ने अति सुविधा सम्पन्न गाडीमा विषेश रुपले उसका लागि वनाईएको गाडीको सिटबाट आफ्ना मालिक मदारीको सहयोगले उत्रिन लाग्दै थियो । मैले त्यो बाँदरलाई गाडीबाट उत्रिएपछि पनि बिभिन्न कोणबाट हेर्न थालेँ । पक्कै त्यो सामान्य थिएन । म सँगसँगै उसलाई हेर्ने मान्छेहरुको क्रमशः भीड पो लाग्न थाल्यो । टोकियो टावर चढ्न आएका मान्छेहरु पनि टावर चढ्न छाडेर उसलाई हेर्न थाले । गाडी चलाएर वाँदरलाई ल्याउने मदारी उसको मलिक भएको पक्का हुन बेर लागेन । नभन्दै सयौं दर्शकहरुलाई भेला पारेर मदारीले त नचाउन पो थाल्यो बडेमानको त्यो बाँदरलाई । बाँदरको कला हेर्न दर्शकहरुको भीड बाक्लिदै गयो । बाँदरले आफ्ना नाचहरु मदारीको आज्ञा अनुसार देखाउदै गयो । बौवा हनुमानले आफ्नो करामत् देखाउने क्रममा मदारीले उसलाई उनिहरुको जापानी भाषाबाट जे जे भन्यो सोही अनुसार उस्ले गर्दै गयो । यस क्रममा आफ्नी प्रेमिकालाइ माया कसरी गर्नु पर्छ, बुढो भएपछि आफ्ना आमाबाबुलाई कसरी स्याहार गर्नु पर्छ लगाएत्का कर्महरु मदारीकै आज्ञाअनुसार उसले सबै दर्शकलाई देखायो । लामो उफ्रने कला माथि उफ्रने कला, टोकरी लिएर बिरामी आमाका लागी चन्दा संकलन गरेको कला निकै उत्कृष्ट थिए उसका । मैले थाहा पाएँ मदारीले बाँदरलाई राम्ररी रत्याएको रहेछ । आम मान्छेले सोच्ने भन्दा फरक खालको कर्ममा रत्तिएर अनुसासन पालन गरेकैले दुबै नङ्ग र मासु जस्ता भएर बाँचेका रहेछन् । अनुशासित भएर रहदा बाँदर र मदारी दुबैको भलो भएको पाँए मैले त्यो चटकबाट ।
एक घण्टा जति हामीले उसका भएभरका सवै कला हेर्यौ । उसका कला सँगसँगै मदारीले पैसा पनि उठाउन थाल्यो । पाँच सय एक हजार दुई हजार जापानिज येनका थुप्रा लागे । मेरो साथीले पनि दुई हजार येन फाल्यो वाँदरको खेललाई । मैले पनि गर्हौ मनले एक हजार येनको नोट फलिदिएँ मेरो देशको बौवा हनुमानको भाइलाई । एकै छिन पछि उसको चटक सकियो र पैसा बटुलेर बाँदरलाई अघि आएकै गाडीको पछिल्लो सिटमा बसाएर सवैलाई सायोनारा गरेर उ कोनी कता बेगियो ।
मदारी त वाँदर लिएर गयो तर एक हजार रुपैयाँको चोट मेरो मनमा निकै वेर बिझाइ रह्यो । हिसाव गरेको झण्डै नेपाली सात सय रुपैयाँको हाराहारीमा थियो त्यो मैले फालेको पैसा । तर त्यो जापानका लागि दशरुपैयाँ नेपालीको महत्व राख्दथ्यो त्यसले किनभने केही दिन अधि मात्र कियोप्लाजा होटलमा म सहित अरु दुई जना जापानिज साथीहरुले सामान्य तीन कप चिया र स्पगेटी खाए बापत तिरेको चानचुन आठ हजार येनको नगदी बिल मेरै गोजिमा हाँसिरहेको थियो अझैसम्म । झण्डै एक हजार नेपाली रुपैयाँ कप चियाको हाराहारी दाम तिरेर पहिलो पटक मैले पनि रेकर्ड राखेको थिएँ । जुन रकम तिर्ने कुरा मेरो हैसियत र ल्याकत भन्दा कयौ गुणा कम थियो तर साथसाथै एउटा अनुभव पनि थियो जीवनमा । पैसा तिर्नुको नमिठो सँगै कहिल्यै नबिर्सने अनुभवको झोला बोकेको थिएँ मैले । बाँदर त गयो उसको खेल सकेर तर उसले धेरै तरङ्गहरु उठाएर गयो मनभरि । झण्डै नेपाली एकलाख आम्दानीको हाराहारीमा आफ्नो खेललाई सकेको हुनुपर्छ मदारीले । उसले करिव एक घण्टाको लगानीमा उठाएको रकम म साधारण नेपाली भएर सोच्दा अनौठो नै थियो तर यथार्थ के थियो भने उ जापानिज बाँदर थियो जस्को कमाइ नेपालका कुनै पनि ओहोदामा काम गर्ने कर्मचारीको भन्दा कयौं गुणा वढी थियो । कुनै घुस्याहा कर्मचारीले टेवल मुनिबाट उठाउने रकम भन्दा पनि संभवतः ज्यादा थियो । जावो वाँदर भनेर के गर्ने ?
त्यसो त नेपालमा झै जापानमा पनि बाँदरहरु नभएका होइनन् । फुजीसान छेउछाउका पहाडहरु र साइतामा प्रान्तका पहाडी इलाकाहरुमा निकै बाँदरहरु देख्न पाइन्छ । तर तिनीहरु नेपाल वा भारतका जस्ता आसे बाँदरहरु छैनन् । कसैले दिइ हाल्छ र खाइहालुँ भनेर तिनीहरु बाटो कुरेर बसेका पनि हुदैनन्। तिनीहरुका लागि सरकारले जंगल सुरक्षित रुपमा छोडिदिएको हुन्छ र बाँदर निस्फिक्री रुपमा जंगलमा भएका फलफुल खाएर रमाएका हुन्छन् । त्यहा प्रविधि र बिकास ढकमम्क फुलेकैले होला मानव समुदायबाट जंगल र प्राकृतिक सम्पदामा अतिक्रमण हुँदै हुँदैन । बरु सुरक्षा र संरक्षण हुन्छ । सार्वजनिक ठाँउ लगायत सरकारी वनजंगलमा जति फुल फुलुन् कसैले टिप्दैनन् त्यहाँ । फलहरु फलेर जंगलै ढाकियोस तर कसैका चोर हातहरु पर्दैनन् त्यसमा । कसैका नजरहरु त्यो देखेर आक्रमणमा जाँदैनन् । यस्ता धेरै दृष्य र उदाहरणहरु जापान यात्राको क्रममा मैले प्रसस्तै देखेको र भेटेको छु । जतिखेर चिचिवु र ओगानो (साइतामा प्रान्त) का बाटामा भेटिएका जंगलहरुमा जामुना र फडिर पाकेर बाटै कालाम्य हुने गरि झर्दथे मैले कुनै यात्रुले गाडी रोकेर फल टिपेको देखिन । जहिले पनि फल पाकेको मौसममा दिनहुँ हिडिरहनु पर्ने ती बाटाहरु भएर जब म गुज्रन्थे सधै आफुले सानो छँदा जीतन राजवंशीका वगैचामा फलेका चिचिला आँपहरु चोरेर खएको मात्र संझिन्थेँ । नेपालमा त सार्वजनिक ठाँउमा फलेका फलहरु पाक्नै नपाई चिचिला अवस्थामै मानव आक्रमणमा परेर सकिन्छन् तर जापानमा देखेँ पाकिसकेको जंगली फलहरुपनि कसैले टिप्दैनन् । त्यसैले म संझन्छु जापानका जंगली जन्तुहरु चरा चुरुङ्गीहरु नेपालका भन्दा कयौँ गुणा भाग्यमानी छन् । तिनीहरुले कुनै खाद्यान्न अभाव झेलेर मानव वस्ती र वाटाघाटातिर भौतारिरहनु पर्दैन । भोकमरीको समस्या नझेलेकैले होला तिनीहरु स्वस्थ्य छन् मोटा घाटा छन् र मान्छेहरुका प्रिय छन् ।
घरपालुवा जनावर कुकुर र विरालाहरुको समेत जापानमा नियमित स्वास्थ्य परिक्षण हुन्छ । मान्छेहरुमा गरिए जस्तै रोग परिक्षणवाट महंगा खाले शल्यकिया गरेर रोग निको पारिन्छ । आखिर यी सवैकुरा हुने र नहुनेमा विकसीत र अविकसित देशका चिनारी हुन भन्दा हुन्छ ।
जापानिज वाँदर लेण्डक्रुजर भित्र वातावरणकुलित अवस्थामा कतै सयर गरिरहेको हुँदो हो अहिले तर मैले मेरा देशका बाँदरहरु सम्झे । पशुपति गुहेश्वरी र स्वयंभूमा भएका लुतो लागेका बाँदरहरु सम्झे । तिर्थालुका हातबाट फलफुल र अन्न झम्टेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने भोकमरि पिडीत मेरा राजधानीवासी ती वाँदरहरु सम्झे । कहिलेकाँही विजुलीको करेन्ट लागेर सामुहिक रुपमा मर्ने पशुपतिका बाँदरहरु सम्झे । यति सम्झाइमा मात्र सिमित हुन नसकेर मैले प्रयोगसालाका लागि परिक्षणमा जान लागेका नेपाली बाँदरहरु सम्झे । त्यतिले मात्र पुगेन मलाइ सिमाना काटेर पारि सिक्किमको यात्रा गर्दा बाटैभरि बाटाका यात्रुहरुको आसमा बचेका बाँदरहरुको दयानीय अवस्था सम्झे । फ्रायडका पुर्खाहरुको विजोग हेर्दा यता र समुन्द्रपारिको तुलाना नै हुन सक्ने थिएन । "कहाँको राजा भोज कहाँको गंगु भैया ।" मलाई लाग्यो मेरा देशका बाँदरहरुको समस्या केबल बाँदरहरुको मात्र थिएन त्यो सम्पुर्ण देशकै समस्या थियो । देशका मदारीहरुको पनि थियो ।
जापानको बाँदर नचाउने मदारीको बुद्धि र कलालाई मैले प्रसंसा गर्नै पर्ने हुन्थ्यो । मान्छेले मान्छे चलाउन नसक्ने भईसकेको मेरो देश एकाध जापानका मदारीलाई नेपाल झिकाएर कला सिके कसो होला भन्ने सोचे मैले । बाँदरनै हुनु छ भने जापानका झै किन नहुने ? मदारीनै हुनु छ भने जापानको झै किन नहुने ?
तर यो मेरो नितान्त र व्यक्तिगत विचारभित्रको आग्रहगत सोचाइ मात्र थियो ।